घरबाट पानी लगेर विद्यालयमा शौच::Online News Portal from State No. 4
बागलुङ, ७ जेठ – बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिका–३ सिसाखानीमा वषौंदेखिको खानेपानी समस्या उस्तै छ । सिसाखानीको माईन गाउँ, किम्ले, स्याहाला, घोरलचिरे, भुसखाने डाँडा, गुहेश्वरी र माझगाउँका बासिन्दाले खानैपानीको सास्ती खेप्दै आएका छन् । डाँडामा बस्ती छ । यस बस्तीलाई पानीका लागि एम मात्र सामूहिक धारो बस्ती भन्दा तल छ । डोकोमा गाग्री राखेर पानी बोक्नुको विकप्प छैन। त्यही पनि कहाँ सहज पाइन्थ्यो र ? सिसाखानीका झण्डै एक सय घरधुरी बासिन्दाका लागि गाउको तल कलिचौर र अन्य दुई स्थानमा सामूहिक धारा छन् ।
बिहान ५ बजेदेखि ८ बजे र अपरान्ह ४ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म पानी वितरण गरिन्छ । पानी आउने समय अगाबै गाग्रीको लामो लाइन लाग्छ । घण्टौ पर्खिपछि मात्रै पालो आउँछ । पानी अभावले स्थानीयको धरायसी जीवन मात्रै नभई सिसाखानी माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतमा पनि चरम समस्या देखिने गरेको छ । विभिन्न संघ संस्थाका कार्यालयसमेत माथि डाँडामै छन् । विद्यालयमा जाँदा आफूहरुले घरबाटै बोतल र थर्मसमा पानी बोकेर आउने गरेको विद्यार्थी सुनिता श्रीसले बताइन् । ‘पानीको अभावले शौचालय र विद्यालय सरसफाइमा समेत समस्या हुने गरेको छ’, सधैं घरबाटै लिएर सफा गर्न पनि सम्भव छैन ।’ श्रीसले भनिन् । प्रयाप्त पानीको मुहान नभएको र बस्ती डाडाँमा हुँदा एक गाग्री पानी लिनका लागि एक बिहानको पुरा समय खर्चिनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय सामाजिक अगुवा सीता श्रीसले बताइन् ।
चुनावका बेला मात्र समस्या के छ भनेर नेताहरु आउने तर जनताका समस्या जस्ताको तस्तै रहेको स्थानीयको गुनासो छ । सिसाखानीमा पानीको समस्या चरम रहेकालेसमाधानका लागि पहल भइरहेको वडा अध्यक्ष खड्ग पुनले जानकारी दिए । ‘बडिगाड गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग माग पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएका छौ,’ उनले भने, ‘यहाँको समस्यालाई मध्यनजर गरी लिफ्ट सिस्टममार्फत एक वर्ष भित्रमै पानी ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ त्यसको लागि करिब ७० प्रतिशत काम सकिएको पुनले दाबी गरे ।